खसीको कुन भाग आफूमात्रै खाऊँ जस्तो लाग्छ ? - केवल एक प्रश्न - प्रकाशितः कार्तिक १, २०७३ - साप्ताहिक
म खसीको मासु नै खान्न त्यसैले यो प्रश्न मेरा लागि उपयुक्त भएन ।
रामभक्त जोजिजु, गायक
दसैंमा खसीको कान आफूले मात्र खान पाए हुन्थ्यो जस्तो लाग्छ । सानो छँदा कान पोलेर खाएको सम्झना ताजै छ ।
म खसी खासै मन राउउँदिन, तर सेकुवा चाहिँ मनपर्छ ।
प्रनव जोशी, निर्देशक
कलेजो, पाए पूरै कलेजो भुटेर एक्लै खान्छु ।
मलाई चाहिँ करंगको हड्डी भएको मासु खान मनलाग्छ । कबाबमा ह्याकुला पनि मनपर्छ ।
पोलेको कलेजो र फल मासु ।
मलाई खसीको ह्याकुलो मनपर्छ र त्यही खान पाए खुसी हुन्छु ।
दीपक घिमिरे, मोडल/कोरियोग्राफर
मलाई खसीको मासु नै मन पर्दैन, त्यसैले जुनसुकै भाग फ्रिमा दिए पनि खान्न । कुखराको भनुँ ?
आफू त भेज, खसी हैन फर्सी खाइन्छ ।
खसीको ह्याकुलो, तर सबै आफै खाउँ भन्ने भन्दा पनि २–४ पिस आफ्नो भागमा परे राम्रो ।
बसन्त तिवारी, मोडल/भिडियो निर्देशक
म त शाकाहारी परेँ ।
म शाकाहारी हुँ । विचरा उनीहरू पनि त प्राणी नै हुन् । उनीहरूलाई पनि बाँच्ने अधिकार छ । अरूको बाँच्ने अधिकार हनन गर्नुभन्दा साग र आलु खानु वेश हुन्छ ।
पोलेको कान, बुवाले जहिले कान चाहिँ मिलनलाई है, कसैले खाने होइन भन्नुहुन्थ्यो । त्यसैले लाग्छ त्यसमा मेरो बाहेक अरू कसैको अधिकार छैन ।
पक्कैपनि ह्याकुला, वास्तवमा ह्याकुलो जत्तिको मिठो अरू केही हुँदैन खसीको मासुमा ।
गोरख विष्ट, वृतचित्र निर्देशक
ह्याकुला पोलेको ।
बसन्त निरौला, निर्देशक
खसीको खुट्टाको सुप । खुट्टा र मुंगको दालको सुप मिठोसँगै तागतिलो पनि हुन्छ ।
अमिर बज्राचार्य, कलाकार
खसीको फल मासु नै मिठो लाग्छ । म विशेषगरी फिलाको मासु मनपराउँछु ।
स्वास्थ्यका कारणले म रातो मासु खान्न ।
शुद्ध शाकाहारीलाई यस्तो प्रश्न सोधिदिने ?
छाला र बोसोबाहेक सबै मनपर्छ । विशेषगरी घरमा बनाइने पक्कु मिठो लाग्छ ।
गर्वले भन्छु म शाकाहारी हुँ ।
उपेन्द्र सुब्बा, कवि/लेखक
केही समय भयो म शाकाहारी भएकी छु ।
सुस्मिता केसी, नायिका/निर्मात्री
छक्का–पञ्जामा माग्नेबुढाले खसीको कान खाएदेखि मलाई पनि यसपटक चाहिँ खसीको कान खान मन लागेको छ ।
खसी घरमै काटिएको हो कि बजारबाट किनेर ल्याइएको हो ? त्यसमा भरपर्छ ।
आन्द्राभुँडी तारेको किनभने अरू बेला त्यति खाइँदैन, तर एकदमै टेस्टी हुन्छ । यसको स्वाद मासुभन्दा फरक लाग्छ ।
मलाई युरिक एसिडको समस्या भएकाले मासु २–३ पिस खाएपनि मृगौंला चाहिँ निकै मनपर्छ ।
योगेन्द्रमणी दाहाल, गीतकार
कहाँ खसी खानु ? बोका पो खाने हो यार । बोकाको सबैभन्दा स्वादिलो अंग भन्नुहुन्न, सुटुक्क खानुपर्छ चट्ट नुन खुर्सानी मोलेर ।
वीरेन्द्र हमाल, रंगकर्मी
म जन्मजात शाकाहारी हँु । त्यसैले सबैलाई शाकाहारी भएकै राम्रो भन्छु ।
रोशन प्रसाइँ, विज्ञापन व्यवसायी
मासु खान्छु, तर त्यस्तो कुनै भाग छैन जुन मलाई मात्र खान मन लागोस् । कसैलाई कुनै भाग खान मन छ भने कृपया मेरो घरमा आउनु होला । म व्यवस्था मिलाउँछु ।
सानोमा एउटा खसीको दुईवटा कान, अनि हामी केटाकेटी ४/५ जना हुन्थ्यौं । कहिल्यै सिंगै कान खान पाइएन । यसपाला चाहिँ सानैदेखिको रहर पूरा गर्न मार हान्नासाथ दुईवटा कान टिपेर टाप कसौंकि जस्तो लाग्दैछ । कान पोलेर धित मर्नेगरी कुरुम–कुरुम पारेर चपाउने रहर पूरा हुन बाँकी नै छ ।
फिला र ह्याकुला आफैले मात्र खान पाए पनि हुन्थ्यो जस्तो लाग्छ ।
ह्याकुला त निकै मनपर्छ, तर राजखानी पनि खानै पर्ला यसपटक ।
मेरो घरतिरका खसी बाहिरिया प्रभावबाट मुक्त ‘लोकल ब्युटी’ हुन्छन्, त्यसैले एउटै अंग छाडदिनँ ।